लक्ष्यभन्दा बढि मुद्दा फछ्र्यौट
उदयपुर १ ,साउन । जिल्ला अदालत उदयपुरमा आर्थिक बर्ष २०७५-०७६ मा लक्ष्यभन्दा बढि मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ ।
अदालत परिषरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधिश तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटाले अघिल्लो बर्ष जिम्वेवारी सरेको ३ सय ५० र चालु आ.व. को ९ सय ४२ गरी १ हजार २ सय ९२ मुद्दा दर्ता भएकोमा ९ सय ३४ मुद्दा फछ्र्यौट भएको जानकारी दिए । जुन लगतको आधारमा ७२ दशमलव २९ प्रतिशत हो भने अदालतको लक्ष्यको आधारमा १ सय ९ दशमलव ४९ प्रतिशत हो ।
यो बर्षको फछ्र्यौटलाई अदालतले लक्ष्यभन्दा बढि फछ्र्यौट भएको आकलन गरेको छ । अघिल्लो बर्ष अदालतले १ हजार ४ सय १५ मुद्दा दर्ता भएकोमा १ हजार ६५ मुद्दा फर्छयौट भएको थियो ।
त्यसैगरी कैदतर्फ दुई हजार १ सय ४० बर्ष १० महिना २१ दिन रहेकोमा ६ सय ९ बर्ष ५ दिन चालु आ.व.मा कैद भुक्तान गरिसकेको जनाइएको छ । दुई न्यायधिशको दरबन्दि रहेको जिल्ला अदालतमा कैद र जरिवाना फछ्र्यौट तर्फ लक्ष्यभन्दा १ सय १५ दशमलव ३३ प्रतिशतले उपलब्धि हासिल गरेको श्रेष्तेदार आचार्यले बताए ।
न्यायधिश सापकोटाले अदालतले चालु आर्थिक बर्षलाई फैसला कार्यान्वयनको बर्षकोरुपमा अघि सारिएकोमा सफल भएको दावि गरे । उनले आ.व. ०७६÷०७७ लाई ‘सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्ने बर्षकोरुपमा मनाईने बताए । छिटोछरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन, न्यायमा पहुँच अभिबृद्धी, न्यायिक सुशासनको प्रबद्र्धन, अदालत व्यवस्थापनको सुदृढीकरण, न्यायपालिका प्रतिको आश्था र विश्वास अभिबृद्धीलाई चौथो रणनीतिक योजनामा समाविष्ट गरी अघि बढिने बताए ।